मल खरीदमा नेपाली कम्पनी अयोग्य, कुन कम्पनीलाई कतिको ठेक्का ? Canada Nepal
मल खरीदमा नेपाली कम्पनी अयोग्य, कुन कम्पनीलाई कतिको ठेक्का ?
क्यानाडानेपाल पौष २८ २०७७
काठमाडौं - कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । रासायनिक मल खरीदको सम्झौता गरेर तोकिएको समयमा मल नल्याएको भन्दै दुवै कम्पनीलाई कारवाही गरिएको हो ।
यसैगरी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउन रु एक अर्ब दश करोड ४८ लाख २३ हजार र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याउन रु ७५ करोड २५ लाख ५५ हजार गरी रु एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख बढीको ठेक्का पाएको थियो । होनिको मल्टिपलले २५ हजार टन युरिया मल ल्याउन रु ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो ।रासस
पौष २८, २०७७ मंगलवार १९:१५:१५ बजे : प्रकाशित